के हो ब्ल्याक होल ? बिस्तृतमा पढ्नुहोस। – OMKARTIMES
के हो ब्ल्याक होल ? बिस्तृतमा पढ्नुहोस।
एजेन्सी २०७५ चैत्र २९, १५:२१ बजे
यो ब्ल्याक होल सूर्य भन्दा ६ अर्ब ५० करोड गुणा ठूलो छ। यसलाई ब्रहमाण्डको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गह्रौ र ठूलो ब्ल्याक होल हो।
तस्बिर केही अनियमित जस्तो देखिएपनि चम्किलो रिङ आकार भने प्रष्ट देखिएको छ। ब्ल्याक होलबाट प्रकाश समेत उम्कन पाउँदैन। वैज्ञानिकहरुले सार्वजनिक गरेको तस्बिर ब्ल्याक होलेको छाँया हो। ब्ल्याक होलको वास्तिवक तस्बिर खिच्न सम्भव नै छैन किनभने यसबाट प्रकाश उम्कन पाउँदैनन्।
इभेन्ट होराइजन टेलिस्कोप निर्माण गर्ने बनाइएका पृथ्वीका ८ टेलिस्कोप। तस्बिरः एरिजोना विश्विद्यालय
पाचौं पेपरमा तस्बिरलाई सुक्ष्म विश्लेषण गर्न अपनाइएको जनेरल रिलेटभिस्टिक मेग्नोटोहाइड्रोडाइनामिक(जीआरएमएचडी) सिमुलेसन र एड्मान्स रे ट्रेसिङ विधि अपनाएर ब्लयाक होलको तस्बिर गाभ्न र जेट लन्चिङका लागि गरिएको कार्यहरुबारे उल्लेख छ।
छैटौँ पेपरमा प्रयोग गरिएको प्रणाली, प्राप्त तथ्यांकहरुमा गरिएको बदली, ब्ल्याक होलको तौल, र ब्ल्याक होल र त्यसको अन्तरीक्ष समयलाई पारिएको सिमितता लगायतको विषय वस्तुहरु समावेश गरिएको छ।
‘अल्बर्ट आइन्स्टाइन सही थिए’
भौतिकशास्त्री उदयराज खनालका अनुसार प्राप्त तस्बिरले अल्बर्ट आइन्सटाइन सही भएको वैज्ञानिक पुष्टि भएको बताए। आइन्स्टाइनले शक्ति र पिण्ड कुनै एक ठाउँमा एकिकृत हुँदा समय र स्थानको अन्त्य हुने कुरा उल्लेख गरेका थिए ।
जसलाई पछि अन्य वैज्ञानिकहरुले उक्त ठाउँलाई सिंगुलारिटी भनेर व्याख्या गरेका थिए ।ब्ल्याक होलको मध्य भागमासिंगुलारिटी पर्छ जहाँ सबै शक्ति र पिण्ड एकिकृत हुन्छ । यसलाई इभेन्ट होराइजनले छोपेर राखेको उनले बताए ।
उनका अनुसार आइन्सटाइनले भने अनुसार स्पेस, समय र गुरुत्वको व्याख्या सही भएको बताए।
ब्ल्याक होलको मध्यभागतिर वस्तुहरु गइरहेको बताए। न्यूटनको गुरुत्वकार्षणको सिद्धान्तमा ‘पोइन्ट मास’ भनेजस्तै रिलेटिभटीको पोइन्ट मासबारे आइन्सटाइनको सापेक्षता सम्बन्धिको सिद्धान्तले दिएको छ। आइन्सटाइनले गुरुत्वले प्रकाशको गतिलाई कुनै प्रभााव नपार्ने कुरा उल्लेख गरेका थिए।
आइन्स्टाइनले ब्रहमाण्डका सम्पूर्ण गति,वस्तु र घटना सापेक्ष रहेको र सबै प्रकाशको गतिसँग सम्बन्धित छन् भनेका थिए। उनले भने अनुसार अन्तरिक्ष तथा अन्तरिक्ष समय पहिले विश्वास गरिए झै चेप्टो छैन,यो घुमाउरो छ। यसबाट पुनः आइन्सटाइनको सिद्धान्त अनुसार ‘स्पेश र टाइम’ को रेखागणितीय बांगोपना हुने कुरा पनि पुष्टि भएको छ। यसअघि गुरुत्वकार्षण तरंगहरु रहेको कुरा पुष्टि भएको थियो।
ब्ल्याक होल एउटा यस्तो क्षेत्र हो जहाँ प्रकाश पनि हराउँछ। प्रकाश यहीँ ‘ट्र्याप’हुन्छ। ब्ल्याक होलले कुनैपनि वस्तुलाई आफूतिर तान्छ र उम्कन दिदैन। यसले सिंगो एउटा सौर्यमण्डल नै आफूतिर तानिदिन सक्ने क्षमता राख्छ। यसमा धेरै नै गुरुत्वकार्षण बल हुन्छ। इभेन्ट होराइजनमा पुगेको वस्तु केही पनि निस्कन सक्दैन। त्यहाँ पुगेको पुगेको वस्तु त्यहाँको केन्द्रमा पुगेर खुम्चेर बस्छ। उदयराज खनाल खगोलशास्त्री।
खगोलशास्त्री एवं २१औँ शताब्दीका प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टेफ हाकिङ्ग्सले ब्ल्याक होल सम्बन्धि धेरै अनुसन्धान गरेका थिए। उनले आफ्नो जीवन नै यसमै समर्पित गरेका थिए। उनले ब्ल्याक होलबाट रेडिएसनहरु निस्कने कुरा पनि उल्लेख गरेका थिए। जसलाई ‘हकिंग्स रेडिएसन’को नाम दिएका थिए।
धेरै ठूला ताराहरु आफ्नो जीवन चक्रको अन्त्यतिर आइपुग्दा उनीहरु नष्ट हुने र यही क्रममा ब्ल्याक होल बनिन्छन्। जहाँ लाखौँ तारा,आकाशगंगाहरु पनि हुन सक्छन्। यसको घनत्व ज्यादै धेरै हुन्छ। धेरै ठूलो वस्तुहरु एउटा सानो वस्तुमा खुम्चन्छन् र यी वस्तुहरुको गुरुत्वकार्षण बल धेरै हुन्छ।
प्रकाशित तस्बिरमा पदार्थहरु ब्ल्याक होलमा खसिरहेको र प्रकाश नदेखिएपछि ब्ल्याक होल भनिएको भौतिकशास्त्री खनालले बताए। उनका अनुसार प्राप्त तस्बिरमा देखिएको उज्यालो ब्ल्याक होलमा खसिरहेको वस्तुले फालेको प्रकाश हो।
‘सूर्य ब्ल्याक होल बन्न सक्दैन’:
भौतिकशास्त्री खनालका अनुसार सूर्य कुनै पनि हालतमा ब्ल्याक होल बन्न नसक्ने बताए। उनका अनुसार सूर्यभन्दा ५/७ गुणा तौल भएका ताराहरु अन्तिम चरणमा गएर ब्ल्याक होल बन्न सक्छन्। ती ताराहरु घुम्चदै गएर ब्ल्याक होल बन्छन् जसको गुरुत्वकार्षण बल धेरै हुन्छ। यस्तै, विभिन्न वस्तुहरु आकाशमा घुमिरहेका वस्तुहरु ठूलो ठूलो भएर ब्ल्याक होल बन्न सक्छन्।
उनका अनुसार हाम्रो सौर्यमण्डल ब्ल्याक होलमा जान नसक्ने बताए। सौर्यमण्डल भन्दा ठूलो ब्ल्याक होल हामी भन्दा लाखौँ प्रकाश वर्ष टाढा रहेको र कुनै ब्ल्याक होल हाम्रो सौर्यमण्डलको नजिकमा आउने सम्भावना धेरै कम रहेको उनले सुनाए। उनका अनुसार यो काल्पनिक कुरा हो।
(एजेन्सीहरु र अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरुको सहयोगमा)